Abacwaningi bathole isifo izinkomo futhi zivimbele ke angehleli - China Chongqing Fangtong
Abacwaningi bathole isifo izinkomo futhi zivimbele ke angehleli
Ukulandela izifundo zofuzo lamathole zikhubazekile, ucwaningo uyakwazi ukwembula isifo ezazingaziwa atholakala phakathi Holstein izinkomo. Inkunzi zizalela kusukela lapho kuguquka kanjalo ukusonteka zivela sesihlanganisiwe lizoqeda ukuvimbela ekubhebhethekeni olwengeziwe.
Phakathi izinkomo Danish ukuzalela isidoda elilodwa zizalela inkunzi isetshenziselwa ukukhulelisa eziningi izinkomo. Ngenxa inseminations eziningi inkunzi eyodwa kanjalo ubaba izinkulungwane amathole. Ngakho-ke, kubalulekile ukunquma ukuthi izinkunzi yokuzalanisa zinezifo sitholwa njengefa.
Yilokho kanye labacwaningi e-University of Copenhagen ngenzile nje. Ocwaningweni phakathi Holstein amathole eshicilelwe esavela ephephabhukwini lesayensi i BMC Ufuzo abazitholile isifo kuze kube manje undescribed phakathi kwezilwane - a ukusonteka ebusweni baye bakhetha ukubiza kobuso Dysplasia Syndrome. Abacwaningi bathole kwezakhi okungukuthi imbangela isifo phakathi kwamathole futhi wazilandela ke emuva esithile esisodwa zizalela inkunzi. Inkunzi sesihlanganisiwe lizoqeda ukuvimbela amacala kwaleso sifo phakathi kwamathole kuzalwa.
'Sithole ukuthi omunye zizalela inkunzi wayenesifiso ngokuguqula izakhi zofuzo kumaseli ijwabu isidoda ezikhiqiza, okwaholela ukusonteka phakathi amathole. Inkunzi wadlula kuguquka ku 0.5 wamaphesenti nenzalo yayo, okungadingi kuzwakale kakhulu ngayinye. Kodwa lokhu inkunzi wayesenze amaphutha wazala amathole kuka 2,000 futhi kungase laba bafikile ukubashaya uyise nakakhulu. Zonke amathole sikhubazekile wafa noma kwadingeka ukuba babhujiswe ngenxa nokuhlukunyezwa ababekuthola. Ngakho-ke, kubalulekile ukuthola imbangela, kusho uProfesa UJørgen Agerholm ezivela eMnyangweni Veterinary Sciences Clinical.
Ngemva kokuba ulwazi etholakele bezilwane lamathole nge deformations ebusweni, UJørgen Agerholm wayofuna amacala ngaphezulu inethiwekhi yakhe izinkomo bezilwane, kuhlanganise Facebook. Wabe wathola amathole ngaphezulu luhlolo.
DNA kusukela amathole sikhubazekile yabekwa izifundo ezihlukahlukene zofuzo, futhi lapha abacwaningi wachaza ingxenye jikelele zofuzo linegama kuguquka ayitholakalanga evamile Holstein DNA. Lokhu kwaba kungenzeka ngenxa okumephiwe obuphelele yangaphambilini ye evamile Holstein DNA.
Abacwaningi ke bafunda ukuthi deformations efanayo ebusweni zitholakala kubantu, futhi lokhu kubangelwa ukuguquka kwezakhi zofuzo engxenyeni efanayo ufuzo, ikakhulukazi le FGFR2 isakhi sofuzo phakathi izingane kuzalwa. Lokhu kwatholakala ukuthi isakhi sofuzo ukuthi zilandelaniswe e ufuzo amathole ', kanye abacwaningi babeyizinceku ukwazi ukunquma ukuthi ngokuguqula izakhi zofuzo yilesi sakhi wayebangele isifo phakathi amathole. Ngakho-ke, isifo womuntu kwasiza abacwaningi enqubeni yokubonakalisa lowo owayenguMesiya kuguquka zofuzo.
Abacwaningi bahlola DNA kubazali amathole 'futsi anaso nesitukulwane wafunda ukuthi kuguquka futhi wabusa lapha. Lokhu kusho ukuthi amathole bahlakulele ukusonteka lapho kuguquka kwadluliselwa kusuka noma unina, noma uyise, futhi hhayi kusukela kokubili umama kanye nobaba, okuyinto kunjalo nezifo eziningi zenani elikhulu eziyifa.
'Inhloso yethu kwaba njalo ukwehlisa isibalo amathole ogulayo futhi abafileyo, njengoba ezinye izifo lezinceku ibuhlungu kakhulu futhi invalidating. Kulokhu emehlweni hung phansi kusukela amakhanda lamathole, kanye deformations ebusweni kwabenza izinkinga ezinzima ukuphefumula. Akunzima ukuba ukucabanga ngobuhlungu okubangelwe. Imiphumela Ucwaningo ezifana nalezi kuyojulisa inhlalakahle isilwane ngokukhawulela ukusabalala kwezifo ezifana. Futhi-ke futhi ngcono nesimo sezimali abanikazi izinkomo, abakghona ukunciphisa ukulahleka ', uchaza UJørgen Agerholm obuye iNhloko Section Veterinary Lokuzaliswa kanye Obstetrics.